Translate Myanmar (Burmese) to Hindi | Multilang.space
translate Myanmar (Burmese) to Hindi, Myanmar (Burmese) to Hindi translations, Myanmar (Burmese) to Hindi Google Translate ,
မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား नमस्ते आप कैसे हैं
မည်သူမဆိုရှိပါသလား? क्या वहाँ कोई है?
ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करता हूँ
ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ, यह हैम्बर्गर कितना खर्च करता है?
သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား? क्या आप मुझे टैक्सी कहते हैं?
ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး मुझे क्षमा करें
တဆိတ်လောက် क्षमा कीजिय!
ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို मुझे दिलचस्पी है
အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ मेरी उड़ान में देरी हो रही थी
ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို मैं यहां व्यवसाय के लिए हूं
မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည် नमस्ते मेरा नाम है
ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို मुझे खेद है, लेकिन मैं शादी कर रहा हूँ
ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ် मैं आप से पूछना चाहता हुं
သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား? क्या आप मुझे हवाई अड्डे पर ले जा सकते हैं?
ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ अभी समय क्या है, कृपया?
အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ? नज़दीकी पुलिस स्टेशन कहां है?
ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား? क्या मैं आपका फोन चार्जर उधार ले सकता हूँ?
ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं?
ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ? कृपया मुझे एक पेय दें, कृपया?
ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ? इसकी कीमत कितनी होती है?
ငါ gluten မှမတည့်ဘူး मैं लस से एलर्जी है
ဆရာဝန်ခေါ်ပါ डॉक्टर को कॉल करें
ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော क्या कोई डॉक्टर है?
ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား? क्या मैं एक कॉल कर सकता हूँ?
ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။ मुझे अपने मालिक को बुलाओ कृपया
ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည် यह जगह बहुत अच्छी है
ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ कृपया मुझे होटल में ले जाएं
အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ? मेरा कमरा नंबर क्या है?